Beeralayda reer Masar waxay saxeexeen qandaraas qaali ah Delta Sugar: beeralayda xilliga cusubi waxay ku beeraan qiyaastii 50,000 oo hektar oo dhul ah oo leh sonkorta leh, iyo shirkad ganacsi ayaa si toos ah u heshay khudradda caanaha ee qiimaha wanaagsan. "Sanadkii la soo dhaafay, waxaan ku beerannay 8,000 hektar oo ah xididdo aan ka yareyno xilli ciyaareedka soo socda," ayay beeralaydu sheegeen, isaga oo intaa ku daray in sonkorta sii kordhaysa ay ka faa'iido badan tahay, tusaale ahaan, cawska sii kordhaya, kuwaas oo hore loogu beeray intii suuragal ah.
Ukraine ayaa hoos u dhacday qiimaha basbaaska
Inkasta oo sicirka barkhada Bulgaariya ee adduunka oo dhan uu si joogta ah u koray, Ukraine ayaa isku mid ah khudradda ay si degdeg ah u lumiyeen jagooyinka qiimaha. Dayrta qiimaha basbaaska macaan ee roodhida Yukreeniya ayaa aad u muhiim ah in maanta sheygan la iibsan karo 15% ka jaban kaliya toddobaad ka hor. Gaar ahaan casaan-gaaban cas cas - oo ilaa 23%.
Warshadda caanaha ee "Galaxy", oo ku taalla Gatchina, ayaa dhowaan qabatay shirkii Golayaasha Maamullada Magaalooyinka iyo Degmooyinka Gobolka Leningrad waxayna soo bandhigeen nidaam cusub oo loogu talagalay kormeerida caanaha. Magaca nidaamkan waa mid kooban oo dhalaalaya - "Hubi!" Sida laga soo xiganayo horumarinta nidaamka, Ruushku wali ma aysan arkin tan oo hadda awood u leh inay kormeeraan dhammaan heerarka wax soosaarka caanaha iyo waxyaabaha caanaha laga sameeyo.
Codka 2.0. Dalka Turkiga, ayaa soo bandhigay jiil cusub oo xayawaan ah
Khabiiro ku takhasusay Jamhuuriyadda Turkiga, kuwaas oo muddo tobanaan sano ah u goosanayay taranta, dadweynaha loo soo bandhigay ilmo cusub. Sida laga soo xigtay saynisyahanno, caanahan ayaa bixiya xoolo xooggan oo xoog leh, taas oo u oggolaan doonta beeralayda inay iibiyaan oo iibiyaan hilibka iyo dhogorta badan! Cunto-yari waxay la kulmeen nuuc cusub oo ku saabsan qaab-dhismeedka siminaarka, oo lagu qabtay beerta "Karmaly" (gobolka Nizhnekamsk ee Jamhuuriyadda Turkiga).
Dunida waxaa si deg deg ah hoos ugu dhacaya jaangooyada
Wax soo saarka ballaaran ee jiiska ayaa sannadkan ka qayb qaatay waxyaalihii waaweynaa ee badeecadan ku jiray bakhaarada Yurub. Marka la eego, qaybiyayaal badani waxay diyaar u yihiin inay si weyn u yareeyaan qiimaha badeecadan si aan jiisku u seexan oo uusan lumin dhadhankiisa iyo tayada qiimaha. "Baahida loo qabo jiiska ayaa dhawaan hoos u dhacay," ayuu yiri ganacsatada.
On beeraha Ruushka ku raaxaysan deeqsi ah "Bear"
Shaqaalaha Machadka Cilmi-baadhista Ural ee Ural Cilmi-baarista ah oo taageero ka helaya shirkadaha "KRiMM" waxay soo bandhigeen noocyo cusub oo baradho ah oo beera-beereedka ah. Horumariyayaashu waxay horey u suurtagashay in ay sameystaan ​​hal-abuurkooda oo ay u bixiyaan magaca funny - "Bear." Sida laga soo xigtay saynisyahanno, "Bear" waxay ku kacaan sannado badan oo shaqo adag ah iyo tijaabin dhamaystiran.
Sida laga soo xigtay wasiirka beeraha ee Poland, waddankiisa ayaa fayruska hargabka doofaarka Afrika waxaa loo qaaday si buuxda loo xakameeyo. Jan Krzysztof Ardanovsky, oo ah madaxa arrimaha beeraha ee Poland, ayaa ku nuuxnuuxsaday in tan iyo 19-kii Sebtembar, oo ka mid ah doofaarka, ma jirin wax cudurro ah oo laga helay fayrasta Polishka. Si kastaba ha ahaatee, koofiyadaha gudaha ma aysan fiicnayn - oo ka mid ah 276 qof oo cudurka qaba ayaa la ogaaday, oo isla markiiba ka dib markii la ogaaday infekshanka loo diray karantiilka iyo sii deyn dheeraad ah.
Cilmi-baadhayaashu waxay kugula talinayaan in ay cunaan diirka dabka
Citrusta citrusku way caafimaad qabtaa si ay u cunaan maqnaashaha, maqaarka, ayaa sheegaya in cilmi-baarayaasha Ukraine ay ka soo qaadatay Kharkov Independent Laboratory. Fikraddooda, waxay ku jirtaa qaabkan oo ay keeni karaan faa'iidooyin badan oo dhadhanka jirka dadka. "Citrusta citrus waxaa loo yaqaanaa fitamiin C sare ah," ayay tiri saynisyahanno.
Booqashadan Buenos Aires oo booqasho rasmi ah ku tagay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa heshiis la saxiixday dhiggiisa Argentine isagoo ka wada shaqeynaya labada dal ee horumarinta kalluumeysiga Argentina iyo Ruushka. Kulankan ayaa lagu qabtey qeyb ka mid ah shirkii G20. Sida laga soo xigtay Safiirka Ruushka ee Argentina, labada dal waxay ka shaqeynayeen heshiiska "kalluunka" waqti hore: "Waxaan ka hadleynaa horumarinta quudinta biyaha iyo casriyeynta beeraha kalluunka," ayuu yiri Dmitry Feoktistov.
Jardiinada Transcarpathian waxay u beddeshaa beerta kulaylaha
Nadiifiye ka socda gobolka Transcarpathian, Violetta Obryko, ma aha laakiin ku faani guuldaradii kareysa iyo cajiib ah - geedo midho leh ee barxadda ee haweeney reer Ukraani siiyey goosashada deeqsi ah ee liin weyn. Sida laga soo xigtay Violetta, miisaanka mid ka mid ah liiska ugu yar ee beerteeda waa qiyaastii 400 garaam. Midhaha ugu weyn ee miisaankeedu le'eg yahay kiilogaraamyada.
U baahan riyo badan!
Masuuliyiinta gobolka Moscow ayaa muujiyay in ay suurtagal tahay in la kordhiyo tirada shirkadaha soo saarka iyo soo saaridda caanaha ariga ee gobolka. Iyadoo la falanqeeyay xaaladda warshadaha, khabiiradu waxay soo gebogebeeyeen in ay jiraan meelo badan oo gobolka ka mid ah oo ku haboon furitaanka ganacsi cusub.
Ukraine "Lyubasha" ayaa si fudud ugu deg degay Georgia
Qaar ka mid ah noocyo badan oo soo saara oo Lyubasha qajaar, kaas oo ay sameeyeen jadeeco Yukreeniyaan ah, sannadkan ayaa degay deegaanno badan oo ku yaal Georgia. "Waxan soo wareejinay beeraleyda oo ka yimid Adjara," Fiisooyinka Fududeynta ee Ukraine, oo la shaqeeya Wasaaradda Beeraha ee Adjara ee mashruuca "Horumarinta horumarinta dalagyada beeraha ee sanadlaha ah - toon".
Sidee beeraleyda beeraleyda ah ee ka yimid Kazakhstan ee khibrad u helay
Waayo-aragnimada cajiibka ah ee beeraleyda laga bilaabo gobolka Lipetsk ayaa aad ugu faraxsan beeralayda Kazakhstan. Maanta, beeralayda Kazakhstan waxay ku talo galayaan in ay si macquul ah wax uga bartaan waaya-aragnimadooda asxaabtooda Lipetsk si ay u horumariyaan barnaamij qarameed oo guuleysta si loo horumariyo warshadaha sonkorta ee dalkooda. Beeraleyda Lipetsk ayaa lagu soo celiyay gawaarida si ay u booqdaan dhowr shirkadood oo sonkor ah.
Raadiye caqli leh ayaa badbaadiya beeraleyda Maraykanka
Faleerejiyaha lagu qalabeeyay sirdoonka dabiiciga ah waxaa baari jiray cilmi baarayaal Maraykan ah. Sida laga soo xiganayo horumarinta, nidaamka aqoonsiga dhirta ayaa ka caawin doona beeraleyda in ay yareeyaan isticmaalka Bacriminta cayayaanka lagu baadho 70%. Tiknoolojiyadda gaarka ah waxaa soo bandhigay saynisyahannada Jaamacadda Tennessee (USA). Waxay qireen in ay sameeyeen faleebo cusub oo ku salaysan nidaamka Nidaamka Fulinta Fulinta ee Smart Guided.
Beeralayda Kherson ayaa quudin doona dalka oo dhan
Gobolka Kherson mustaqbalka dhow wuxuu noqon doonaa xarunta dhexe ee Ukriga ee bariiska. Sida laga soo xigtay Alexei Vadaturinsky, oo madax ka ah shirkadda Nibulon, shirkaddoodu waxay leedahay barnaamij maalgashi oo ballaadhan, mid ka mid ah waxyaabaha mudnaanta leh ay tahay in la cusboonaysiiyo hawlaha bariiska ee gobolka Kherson.
Dhalinyarada reer Ruushka ah ee Russia waa 10 sano ka weyn
2018 waa sannadka jiilaalka ee Ururka Ruushka ee Dhallinta Dhallaanka. Ururkan dadweynaha wuxuu ka bilaabmaa 2008-dii, tan iyo markaasna wuxuu u keenay faa'iido badan labada ka-qaybgalayaasha iyo dalka oo dhan. Taageerada dhalinyarada reer miyiga ah 10-kii sanoba waxaa si shakhsi ah u siiyay Wasiirka Beeraha ee Ruushka, Aleksey Gordeyev.
Walaaca guduudan: Iran xaliya dhibaatada dhoofinta yaanyo
Iran, sannadkan, 12-ka Oktoobar, dhoofinta baasto yaanyo ah ayaa si rasmi ah loo mamnuucay. Go'aankaan waxaa soo saaray Wasaaradda Warshadaha ee dalka. Si kastaba ha ahaatee, mamnuucista ayaa hadda la qaaday. Sida laga soo xigtay Wasaaradda, joojinta ayaa shaqaynaysa ilaa ogeysiis dheeraad ah. Sababta loo xayiray mamnuuciddu waxay ahayd warqad ka timid Wasiirka Warshadaha, Mining iyo Trade, Reza Rahmani.
Beerta Vinnitsa waxay korodhaa bambo waaweyn
Qof deggan degmada Murovanokurilovets ee gobalka Vinnitsa, oo ka tirsan howlwadeenkii hore Mikhail Gvyazdovsky ayaa si farxad leh u xusuusta noloshiisa hore ee sarkaalka. Si kastaba ha ahaatee, hiwaayadiisa ayaa ka caawinaya inuu iftiiminayo maalmaha asbuuca ee soo socda - noocyo fara badan oo ka mid ah dhirta, qaraha macaan iyo canbaaro udgoon. "Baaliga baalasha ayaa weli ah mid cusub," Mikhail ayaa qirtay.
Beeraley ka soo jeeda tuulada Ruzvayi, Rakhmiddin Nazhdindinov, ayaa muddo labaatan sanno ah noloshiisa u huray si uu u koro geedo kala duwan oo ku yaal Pamirs. Xulashada iyo qallajinta noocyada kala duwan ee dalagyada warshadda waa Rakhmiddin shaqadiisa ugu xiisaha badan. Degmada Darvaz ee gobalka Badbuuri, waxaa loo yaqaanaa xirfadle run ah, oo jacayl u leh hawshiisa.
Shirkii aduunka ee AGRI-TECH wuxuu noqonayaa hindiso aad u fiican oo loogu talagalay ganacsadaha beeralayda ah
Sannadki sannadka labaad, Agri-Tech ayaa iskaashi la leh Xawaaladda Ganacsiga Radikeri si loo sameeyo "maalin qandaraas". Maalintan ayaa loo qeybin doonaa taageerada bilawga ah ee la xidhiidha warshadaha beeraha. Munaasabadaani waxay dhici doontaa Maarso 18, 2019 San Francisco, California, ka hor inta aan la gaarin Guud ahaan Shirarka Caalamiga ah ee Quwada Nuclearka.